DHAAYAHA SAXAAFADDA Q-8AAD W/Q: Xasan Maxamed Xaaji “Duusoos” | Laashin iyo Hal-abuur
DHAAYAHA SAXAAFADDA Q-8AAD W/Q: Xasan Maxamed Xaaji “Duusoos”
Sooyaalka iyo soosaariddii daabacaadda:
Mar haddii warbaahin la helay oo joornaal, idaacado iyo muuqbaahiyayaal la soo saaray waxa loo baahday in la keydiyo waxyaabihii la qoray iyo xogaha ku dhex aasan, sidaa darteed waxa loo baahday in la soo saaro makiinado daabacadeed si ay u fududaato soo saariska qoraalka iyo xogaha. Haddaba, billowgii kacaankii warshadaha, makaanikada farsamada gacanta ee qaabka loo yaqaan ‘Gutenberg‘ oo gacanta lagu hayey walina wax badan iskama beddelin, in kasta oo agabyada cusub ee dhismihiisa iyo hal-abuurnimada kaleba ay si tartiib tartiib ah u wanaajiyeen waxtarka daabacadda. Markii ay ahayd: 1800 ama qarnigii 18-aad ayaa Lord Stanhope wuxuu dhisay saxaafad bir ah taas oo hoos u dhigtay xooggii loo baahnaa (90%) sagaashan boqolkiiba iyada oo labanlaabtay cabbirka ayaa la daabacay, woodna u leh: 480-bog saacaddiiba, saxaafadda Stanhope waxay labanlaabantay soo saariddii hore ee saxaafadda. Si kastaba ha noqotee, xaddidnaanta habka daabacaadda dhaqameed ayaa soo muuqatay.
Laba fikradood ayaa beddelay qaabeynta daabacaadda si xagjir ah ama fog, marka hore, adeegsiga awoodda uumiga ee ay ku shaqeynayo mashiinnada iyo tan labaad beddelka daabacaadda oo lala simay dhaqdhaqaaqa wareegga ee dhululubada. Labada shayba waxay ahaayeen markii ugu horreysay oo si guul leh uu u hirgeliyo madbacaddii Jarmalka ee Friedrich Koenig taxane naqshado saxaafadeed ah oo la hindisay intii u dhaxeysay 1802 iyo 1818-dii. Markii uu u soo guuray London 1804, Koenig wuxuu si dhakhso leh ula kulmay Thomas Bensley oo uu ka kasbaday taageero dhaqaale mashruuciisa 1807. Kaenig wuxuu sharciyeeyay 1810, Koenig wuxuuna sammeeyay mishiinka uumiga “wuxuu u egyahay saxaafadda gacanta oo ku xiran mishiinka uumiga.”
Koenig iyo Bauer waxay laba ka mid ah moodeelladoodii ugu horreeyay ka iibiyeen The Times oo ku yaal London 1814 oo awood u leh 1,100 wax soo saarkiisa saacaddiiba. Daabacaaddii ugu horreysay ee sidaas loo daabacay waxay ahayd: 28 Noofambar 1814. Waxay ku sii socdeen inay si fiican u dhammaystiraan tusaalaha hore si ay markiiba ugu daabacdo labada dhinac ee warqad. Tani waxay billaabatay geeddi-socodkii dheeraa ee samaynta wargeysyada si ay u heli karaan akhristayaal tiro badan (taas oo iyaduna gacan ka geysatay faafinta akhris-qorista), laga billaabo sannadihii 1820-naadkii ayaa la beddelay dabeecadda soo-saarista buugaagta, taas oo ku qasbeysa in si weyn loo jaangooyo cinwaannada iyo metadata kale. Shirkaddooda Koenig & Bauer AG ayaa wali ka mid ah shirkadaha ugu waa weyn adduunka ee soo saara madbacadaha maanta.
Madbacada daabacan ee uumiga ku shaqeysa oo laga sameeyay 1843-kii Mareykanka gudihiisa Richard M. Hoe, ayaa ugu dambeyntii oggolaatay malaayiin nuqul ka mid ah bog hal maalin ah. Wax soo saarka ballaaran ee shaqooyinka daabacan ayaa kobcay ka dib markii loo wareejiyay waraaqda la duubay, maadaama quudinta joogtada ahi ay u oggolaatay saxaafadda inay ku socdaan xawaare aad u dheereeya. Naqshaddii asalka ahayd ee Richard Hoe waxay shaqeysay ilaa 2,000 in ay kor u kacaan saacaddiiba halkaas oo ay ka dhiganayay 4-bog oo sawirro ah oo saxaafadda siinayay 8000-bog saacaddiiba. Markii ay ahayd: 1891 The New York World (1860-1931) iyo Philadelphia Item (1898-1915 ) waxay ahaayeen wargeysyo shaqeynaya oo soo saara 90,000 oo 4-bog oo xaashi ah saacaddii ama 48,000 8 oo xaashiyadood .
Sidoo kale, bartamihii qarnigii 19-aad, waxaa jiray horumarin gooni ah oo shaqo-doonka ah, makiinado yar-yar oo awood u leh inay daabacaan qaybo qaabab yar-yar leh sida biilka madaxa, waraaqaha madaxa, kaararka ganacsiga iyo baqshadaha. Cadaadiska shaqaaluhu wuxuu awood u lahaa in si dhakhso leh loo dejiyo (celceliska waqtiga dejinta ee shaqo yar wuxuu ka hooseeyaa 15 daqiiqo) iyo wax soo saar dhaqso ah (xitaa makiinadaha shaqada ku shaqeeya ee treadle-power-ka waxaa loo arkaa inay caadi tahay in la helo 1,000 warqadood saacaddiiba . Shaqada daabacaaddu waxay u muuqatay inay tahay xalka ugu macquulsan ee kharash-ku-kordhinta ganacsiga ee xilligan.
Shaqada Johannes Gutenberg ee daabacaaddu waxay soo billaabatay qiyaastii 1436 markii uu la kaashaday Andreas Dritzehn – nin horey u soo tababbaray jarista kuul – iyo Andreas Heilmann, milkiilaha warshad wax soosaarta. Si kastaba ha noqotee, ma ahayn ilaa maxkamad ka dhan ah Gutenberg sanadkii 1439 inay jirtay diiwaan rasmi ah; Markhaatiga ayaa ka wada hadlay noocyada Gutenberg, tirakoobka biraha (oo ay ku jiraan macdanta ”lead ” iyo noocyadiisa.
Isaga oo hore u soo shaqeeyay sidii dahab yaqaan, Gutenberg wuxuu adeegsaday aqoon xirfad leh oo ku saabsan birta oo uu ku bartay farsamayaqaan. Isagu wuxuu ahaa kii ugu horreeyay ee soo saara nooc ka mid ah dawooyinka macdanta “lead”, “tin” iyo “antimony”, oo muhiim u ahaa soo saarista nooca waara ee soo saara buugaag tayo sare leh oo la caddeeyo inay aad ugu habboon yihiin daabacaadda waxyaabaha kale ee la yaqaan. Si loo abuuro noocyada gaarka ah ee ‘lead’, Gutenberg wuxuu adeegsaday waxa loo arko inuu yahay mid ka mid ah hal-abuurradiisa ugu xariifsan, matrix khaas ah oo awood u siisa sameynta deg-degga ah ee saxda ah ee noocyo cusub oo noocyo ah oo ka samaysan shaxanka lebbiska. Kiiskiisa caadiga ah waxaa lagu qiyaasaa inuu ka kooban yahay 290 sanduuq oo gaar ah, badankoodna waxaa looga baahnaa astaamo gaar ah, kala goysyo, xarakayn iyo wixii la mid ah.
Gutenberg sidoo kale waxaa lagu tiriyaa soo saarista khad saliid salka ku haya kaas oo ka cimri dheeraa marka loo eego markabkii hore ee biyaha lagu isticmaali jiray. Maaddaama oo uu ahaa qalab daabacan wuxuu u adeegsaday warqad iyo xaashi (tayo sare leh). Gutenberg Kitaabka Quduuska ah, Gutenberg wuxuu baaray daabacaadda midabka daabacaadda qaar ka mid ah cinwaannada bogga, oo keliya ayaa ku jira nuqulada qaarkood. Shaqo dambe, Mainz Psalter laga billaabo 1453 oo ay u badan tahay inuu naqshadeeyay Gutenberg balse, lagu daabacay hoosta shucuubtiisa ku xigta Johann Fust iyo Peter Schöffer, ayaa si xeel dheer u daabacay xaraf casaan iyo buluug ah.
W/Q: Xasan Maxamed xaaji ”Duusoos”.